Olona miisa 7 no voarohirohy tamin’izany. Natolotra ny « police de mine » ao amin’ny sapan-draharaha iraisam-paritra misahana ny harena an-kibon’ny tany ao Fianarantsoa moa ny fanohizana ny fanenjehana araka ny lalàna velona.
Manoloana ny fitrandrahana vatosoa tsy ara-dalàna izay nataon’ny olona maro tsy nahazo alalana tao amin’ny toeram-pitrandrahana Befitsiotry, Soatanimbary Kaominina Tanamarina Bekisopa, Distrikan’Ikalamavony, no nahatonga ny fandraisana fepetra ny teo anivon’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria tao Matsiatra Ambony.
Vokatry ny ezaka fametrahana ny sakan-dalan’ny mpitandro filaminana amin'ny toerana maro nentina hanaraha-maso ireo fiara mivezivezy izay hitiliana ireo vatosoa notrandrahana tamin’ny fomba tsy ara-dalàna avy amin’io « carrière » io no nahazoana ireto harem-pirenena ireto. Andrasana noho izany ny tohin’ny fanadihadiana izay atidoha mikotrika sy mpandray ambadik’izao fitrandrahana an-tsokosoko izao.